Infrastructure | December 2019
Sida loo abuuro baradhada bacaha?
Editor Ee Doorashada December 9,2019
Ugu Weyn Ee Infrastructure
Sidee loo dhisi karaa veranda leh gacantaada?
Veranda waa dheereeye guriga oo kuu ogolaanaya inaad ku qanciso dabeecadda, isla mar ahaantaana ay ku jirto jawi deggan guriga. Waxaa laga samayn karaa leben ama qoryo, waxaanan kuugu soo bandhigi karnaa fursada ugu fiican ee ugu yaraan waqti badan qaadato - veranda polycarbonate. Goobta Ugu horreyntii, waxaad u baahan tahay inaad dhisatid mashruuc dhisme ah, taasina waxaad u baahan tahay inaad si cad u fahanto sababta aad u baahan tahay, nooca aad u dooratid, nooca aragtidaada ayaad ka fiirsan doontaa.
Qeexida hababka looga saarayo rinjiga hore ee derbiyada qalabka kala duwan
Qorsheynta rinjiyeynta derbiyada, hawsha ugu horreysa ee uu wajahayo sayidku waa ka saarista daaha hore. Maadaama aan la ogeyn, qofku wuxuu u maleynayaa in tani aysan ahayn arrin muhiim ah, si kastaba ha ahaatee, canshuurta noocan oo kale ah waxay si xun u saamayn kartaa natiijada kama dambaysta ah. Sababta ugu muhiimsan, sida loo sameeyo si sax ah, waxaad u baahan tahay inaad taqaan qof kasta oo qorsheynaya dayactir gacmihiisa.
Deedka qashinka siligga ah ee gacmahaaga u gaar ah: sida loo jiido
Milkiilayaasha guryahooda, cariishyada xagaaga, iyo sidoo kale deganayaasha waaxda gaarka loo leeyahay ee magaalooyinka badanaa waxay la kulmaan dhibaatada lagu xirayo qoryaha. Deedka sare ee tayada aasaasiga ah ee aasaasiga ah wuxuu u baahan yahay maalgalin muhiim ah ee xooga iyo hantida dhaqaalaha. Tani waxay noqon kartaa mid xaq ah haddii aad leedahay meel ballaadhan oo ka baxsan magaalada, halkaas oo aad rabto inaad ku kalsoonaato naftaada oo aan ka aheyn deriskaaga iyo baabuurta kale, laakiin sidoo kale xayawaanka qaloocan.
Sida loo dhiso qaab shaqo ee aasaaska daadka
Shardi u ah dhismaha xayndaabka waa dhismaha qaabka. Naqshaduhu waa inay noqdaan kuwo joogto ah, ka hortagaya suurtagalnimada suurtagalka iyo deformations, adkaysiga ballaaran ee aasaaska. Ka dib markaad dib u eegto sifooyinka, xeerarka iyo dabacsanaanta qaabeynta qaabeynta, waxaad si badbaado leh ugu socon kartaa wax soo saarkeeda.
Maxaa loo baahan yahay iyo sida loo doorto midhaha canabka
Xilliga dayrta waxaa jiraya waqti ay khamriga wax u qabtaan bilaabaan. Si aad u baartid tiro badan oo canab, waxaad u baahan tahay qalab gaar ah. Qalabkan waxaa loo isticmaalaa labadaba wax soo saarka waaweyn iyo winery gaar ah. Ka dib oo dhan, waxay badbaadisaa ma aha waqti kaliya, laakiin sidoo kale awood. Qodobkani waxaan fahamsanahay waxa keena burburiyaha, sida uu u shaqeeyo iyo shuruudaha xulashada.
Sida loo daboolo saqafka oo leh ondulin
Markaad saqafka ka shaqeyneyso, waxaa badanaa jira dhibaato la xidhiidha doorashada wanaagsan, tayo sare leh iyo walxaha qarxa. Khabiiradu waxay ku talinayaan in ay fiiro gaar ah u yeeshaan bey'ada jawi ammaan ah, adkaysi leh, qoyaan u adkaysata oo aan qaali aheyn. Sida loo daboolo saqafka ay u gaar ah, wax ka bartaan maqaalka.
Sida loo dhiso biyaha ceelka guryaha gaarka loo leeyahay
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee hagaajinta guryaha gaarka loo leeyahay waa biyo. Iyadoo aan loo eegin marka nidaamka biyaha la dhigo - marxaladda aasaasidda aasaaska ama inta lagu jiro dib-u-habaynta dhismaha, wajiga naqshadeynta waa in lala yimaadaa mas'uuliyad buuxda. Sida loo isticmaalo tuubada guriga, meesha laga bilaabayo iyo waxyaabaha ay isticmaalaan, aynu aragno.
Sida loo xareeyo guriga oo ay la socdaan gacmahooda
Horumarintu waxay na siisay qalab badan oo guriga iyo qalabka kale, iyada oo aan lahayn guryo casri ah oo aan la qoondeeyn karin. Badankood waxaa laga helaa shabakada, ka dibna waxaa jira dhibaatooyin: in la iibsado "tees" oo leh fiilooyin dheellitiran, kuwaas oo muuqaalka muuqaalkooda ku dhufo gudaha ama la xiro siyaalo dheeraad ah. Aynu sii degganaan karno labaad, adoo raadinaya dhammaan waxyaabihii ay ka midka ahaayeen.
Soo saarida bir ah ama xayndaab alwaax ah shtaketnik
Deedka bowl - mid ka mid ah dayrka ugu caansan ee dadka. Tani waxay sabab u tahay awoodeeda, dulqaad iyo qiimaha macquulka ah ee dhismaha. Dayrarka noocan oo kale ah ayaa la abuuri karaa dhawr maalmood oo keliya. Qodobbo dheeraad ah oo ku saabsan qodobbada waxaan si faahfaahsan uga hadli doonaa noocyada dhismooyinkaas iyo xeerarka lagu abuurayo xayndaabkaaga xayndaabka xayndaab.
Sida loo dhigo isbeddelka iftiinka
Guri kasta oo raaxo leh waa mid aan la iloobi karin iyada oo aan la xidhiidhin iyo fiilooyin. Iyadoo qaar ka mid ah cilladaha qaar ee hawlgalka qalabka guryaha iyo qalabka kala duwan, waxaad ku hagaajin kartaa naftaada, adoo u adeegsanaya caawimaad qasab ah oo takhasus leh. Qodobkani, waxaan eegeynaa sida si sax ah loogu xiro furayaasha iyo saldhigyada derbiyada gurigaaga - meesha ay tahay inaad doorato, qalabkee aad u baahan tahay iyo waxa ay yihiin taxanaha shaqada.
Doorashada gawaarida: beerta ama dhismaha lugaha
Shaqada xagaaga kuleylka iyo beerta dhexdeeda waa gebi ahaanba la socota baahida loo qabo in loo wareejiyo qaar ka mid ah culeysyada, si dhakhsa ah ama ka dambeeya su'aasha soo socota ee helitaanka gaariga ama gaariga. Marka ugu horeysa ee laga yaabo inay u muuqato in marka la iibsanayo gawaarida beeraha wax su'aalo ah iyo dhibaatooyin waa inay soo baxaan, sababtoo ah badeecadu waa mid sahlan.
Mansard saqafka: Jaantuska rakibaadda iyo tilmaamaha dhismaha
Qalabka qolka waallida had iyo jeer looma isticmaalo si wax ku ool ah, sidaas awgeed waxaa habboon in la tixgeliyo suurtagalnimada in la diyaariyo saqafka adag, oo si ballaaran u ballaarinaya hoyga nool ee guryaha gaarka ah. Dabcan, shaqadan laguma magacaabi karo mid aad u fudud, laakiin waxba maaha wax aan macquul aheyn, iyo aqoon gaar ah oo aad adigu ku qabsan kartid.
Rakibaadda rakibidda kululeeyaha biyaha kulul
Guryaha iyo guryaha oo dhan ma laha biyo kulul oo aan kala go 'lahayn. Dadka degan waxay mararka qaar wajihi karaan awood la'aanta in ay qubaystaan ​​ama qubeystaan. Dhibaatadani waxay ka caawineysaa inay la qabsadaan kululeeyaha biyaha socda. Waxaa lagu rakibi karaa musqusha lafteeda. Doorashada meel Gaar ahaan, awood ku filan ayaa loo baahan yahay si loo isticmaalo kululeeyaha biyaha degdega ah.
Sida loo sameeyo xakamaynta dusha sare ee albaabka
Baadhitaanka qalabka casriga ah ayaa si fudud u fududeeyay habka dhismaha darbiyada gudaha iyo dib u dejinta ee dhismaha. Hadda waqti gaaban oo aan lahayn maaliyad dhaqaale oo waaweyn waxaad ku dari kartaa gudaha. Maanta waxaan si faahfaahsan u sharxi doonaa sida loo sameeyo derbi ka mid ah dusha sare. Marka la raaco tilmaamaha, xitaa qof ka fog dhismaha ayaa la qabsan doona hawshan.
Sidee looga saaraa qalabka ka sameysan daboolka
Arrinta ku saabsan dayactirka marwalba waa mid aad u xiiso leh, haddii adiguna aad adigu rabto in aad fuliso dhammaan tallaabooyinka loo baahan yahay, markaa masuuliyaddu waa laba jeer. Maqaalkani waxaan ka wada hadli doonaa mid ka mid ah qaybaha ugu caansan ee dib u dhiska gurigaaga - ka saarista qashinka qubayska. Marka ugu horeysa, wax kastaa waxay u muuqdaan kuwo aad u fudud oo la fahmi karo, laakiin si dhaqso ah oo si fudud loo sameeyo, waxaa habboon in wax laga ogaado qaar ka mid ah waxyaalihii fulinta.
Sida loo dhejiyo indhoolayaasha daaqadaha caaga ah
Dad badan ma oga in indhoolayaashu ay soo bandhigeen dhowr qarni kahor. Maanta waa mid ka mid ah qalabka ugu qurxinta iyo ilaalinta ee daaqadaha. Maqaalka ayaa ka wada hadli doona sida si madaxbannaan loogu xiro indhoolayaasha daaqadaha caagga ah. Waxaad awood u yeelan doontaa inaad ogaato nooca daaqadaha daaqadaha badan ee daaqadaha ah iyo sida loo isticmaalo si habboon loo rakibo indhoolayaasha tooska ah iyo kuwa qumman.
Tilmaamaha alaabta loo yaqaan 'plasterboard plasterboard
Qalabaynta - mid ka mid ah meelaha ugu caansan ee dukaamada qalabka. Qaar badan, waxay arkeen xajmiga qodobbadan, waxay u weheliyeen ixtiraam ay u hayaan sayidyadooda oo la shaqeynaya daahaas. Inkasta oo, xaqiiqda, ma jiraan wax khiyaamo ah: Waxaan u baahanahay kaliya xisaabinta iyo qaar ka mid ah dhegeysiga buugga (iyo sidoo kale cadad cadaadis ah). Aynu isku dayno in aan soo koobno ​​khibradda ah in la xiro qalabka nadiifka ah iyo qodobo muhiim ah oo u baahan in la ogaado kuwa qorsheynaya inay iskood u sameeyaan.
Tallaabooyinka la taaban karo ee waddanka oo leh gacmahooda
Waxyaabaha ugu fiican ee soo-saarka wadooyinka ee cariishyada waa la taaban karo, maadaama ay tahay mid aad u kalsoon oo adkaysi leh. Laga soo bilaabo waxa aad samayn kartaa noocyo kala duwan oo waddooyin ah, mana u baahnayso maalgalin maaliyadeed oo ballaadhan. Intaa waxaa dheer, waa mid aad u sahlan inaad sameyso marin jardiino ah oo aad adigu leedahay, adiga oo aan haysan khibrad ama waxbarasho haboon.
Tijaabinta sigaarka siinta: noocyada iyo mabda'a shaqada, waxaan dooran karnaa ugu fiican
Dhismayaasha Dacha iyo qoysaska gaarka loo leeyahay ayaa badanaa ku yaal meelo ka fog fog nidaamka bullaacadaha ee dhexe, sidaa daraadeed hawsha muhiimka ah ee milkiilayaashoodu waa inay hubiyaan in si habboon loo tuuro biyaha wasaqda ah si waafaqsan heerarka nadaafadda. Marka la barbar dhigo dhammaan macmiilku ma dabooli karo shuruudahan, marka dhibaatadan waxaa lagu xalliyaa iyada oo lagu rakibayo taangiyo feero, kuwaas oo laga wada hadli doono.
Sida loo sameeyo guriga indhoole ah ee gurigaaga leh gacmahaaga. Noocyada aagga indhoolayaasha ah
Dhismaha aagga indhoolayaasha ah ee guriga dhexdiisa laguma magacaabi karo hawlaha ugu adag ee dhismihiisa, laakiin tan, arrin sahlan, waxay leedahay sifooyin gaar ah. Aynu ogaanno sababta aan ugu baahannahay noocyadaas oo dhan, nooca nuuciisa iyo sida loo isticmaalo si sax ah. Waa maxay indhoole indhoole ah Aagga indhooluhu waa daad aan biyuhu lahayn, oo lagu soo bandhigay qaab cajalad ah ama la duubay, oo hareeraha guriga ku wareegsan wareegga wareegga.
Liiska faahfaahsan ee sababaha hibiscus ay u tuuri karaan burooyinkooda aan caleemaha lahayn. Sidee loo qurxiyaa quruxda?
Koraaya strawberries ee aqalka dhirta lagu koriyo oo dhan sanadka: Talooyin iyo murugo
Sidee loo gooyaa ducks guriga: talooyin wax ku ool ah
Hibiscus Red-leaved: Koraaya iyo Qaababka
Caanaha dhaadheer: beerashada iyo daryeelka
Basasha sii kordhaya
Beerto caleenka dayrta
Cunto hilibka hilibka
Siyaabaha loo xakameynayo cagaarka
Dad badan ayaa ogaanaya dhibaatada is-qurxinta oo kale ah, sida wareegyada mugdiga iyo carqaladaha aagga ku wareegsan indhaha. Maqaalkani wuxuu u hoggaansamey joojinta xaaladaha qallafsan iyada oo la adeegsanayo alaab guri oo la diyaariyey iyadoo la isticmaalayo dhammaan qaybaha dhir. Guryaha bogsiinta ee dhirta Guryaha faa'iidada leh ee dhirta waxaa sabab u ah faytamiin badan oo hodanka ah, jiritaanka maadooyinka yaryar iyo macro, saliidaha lagama maarmaanka ah, asiidhyada dabiiciga ah, fiyuusta cuntada. Read More
Sida loo qaato manka shinni ah, siyaabo waxtar leh iyo khilaafaadka alaabta
Riddle ee sharooto baradho - sharaxaad iyo sifooyinka baradho "Black Prince"
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Infrastructure 2019